Yunaaytid Isteets Hogganaa Keeniyaa Duraanii Malamaaltumman Farrajje
Bulchaan magaala Naayroobii duraanii Maayik Soonkoo Malaamaltummaa guddaa keessaa harka qabaachuu isaanii, kunis mata’aa ykn Gunaa fudachuu namoota kana rawwataniif immo maallaqa kennuu dabalata jechuun Yunaaytid Isteetes beeksiiftee jirti.
Dubbii himaan ministeera dantaa alaa Yunaaytid Isteets Need Praayis ibsa baasaniin akka jedhanti, hojiin seeraan dhorkaa ta’e kanaan Sonkoon kontraata hojii mootummaa kanneen isatti hidhata qabaniif kennaa ture.Tarkaanfiin isaa kun dhaabbattoota Demookraatawaa fi tajaajiila uummataa keessatti, seeraan buluu fi amantaa uummataa dhabamsisee jira.
Haadha warraa soonkoo primors Mbuvi, intaloonni isaanii lameen saumu fi saalmaa akkasumas mucaa xiqqaan qaban dabalatee miseensoonni maatii itti dhiyeenya qaban gocha kana keessatti ramadamanii jiru.
Kunis kan ta’e keeyyata 7031hir keeyyata c irra ministriin dantaa alaan kan ka’ame irratti hundaa;auun yoo ta’u, hojii biyya alaa keessatti gaggeeffamanii fi sagantaalee isatti hidhata qaban ilaalchisee seerabara 2021 ba’e irratti hirkachuun Soonkoo fi maatiin isaa itti dhiyeenyaqaban Yunaaytid Isteetes seenuuf vizaan hin kennamuuf jedha.
Ministriin dantaa alaa Yunaaytid Isteetes dhiittaa mirga namoomaa Keniyaa keessaa kan dhiyeenya gabaase, gochi malaamaltummaa jabaan jiraachuun rakkoo guddaa ta’uun kan itti fufee yoo ta’u kanaafis mootummaa keessasadarkaa hundumaatti itti gaafatamuummaan hin jiru jedha.
Kantibaan magaala Naayroobii duraanii Maayik Soonkoo bara 2019 keessaa yakka malaamaltummaa adda addaan kan himataman yoo ta’u bara 2020 naamuusa dhabiinsa walii galaa fi aangoon gar malee gargaaramuu kan jedhuun/ angoo isaanii irraa kaafaman.yakka ilaalchatti hin dhiyaatiin jira.
Traanspaareensii Intarnaashinaal akka jedhutti, Keniyaan malaamaltummaan biyyoota addunyaa irra jiran 180 keessaa 128ffaa irra kan jirtu yoo ta’u, keniyaa keessatti malaamaltummaa gaggeeffamu irratti manneen murtii biyyatti keessatti adabii kennamu lafa irra harkiifataa ta’u isaan lammiwwan biyyatti amma iyyu rakkataa jiru.
Prezidaantiin Yunaaytis Isteets Joo Baaydiin imaammata alaa keessattimalaamaltummaa dura dhaabachuu kan jedhu dhimmi ijoo ta’u lafa ka’anii jiru.Masaraan Waayit Haawuus gama isaan. Malaamaltummaan dhukkuuba Kaansarii qaama hawaasaa keessa jiruu , dhukkuba amantaa uummataa nyaatuu akkasumas humna mootummaan uummata isaaf gochuuf qabu kan laamsheessu jechuun ibsii masaraa Waayit Haawus biraa ba’e hubachisee jira. wAlitti bu’iinsaa
Kana malees gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee keessatti wal qixxummaa dhabamsisuun adda addummaa hammeessee carraa daldalaa fi dinagdee gad buusa.Motummaa keessatti Walitti bu’iinsaa hammeessuun amantii tuffachuu jabeessa.
Bu’aa dhunfaaf jecha aangoo qaban gargaaramuun dararaa geesisuun kun qabeenyaan badhaadhuu qofa otoo hin taanee kabajaa dhala namaaf maluu fi nagaan itti tolee jiraachuu dabalata.
Dubbii bhimaan ministeera haajaa alaa Amerikaa Need Praayis akka jedhanti, bulchaan magaala Naayroobii duraanii Maayk Soonkoo fi maatii isaa irratti tarkaanfiin akkasii fudhatamuun, Yunaaytid Isteets malaamaltummaa dura dhaabachuun seeraan buluun akka jiraatu akkasumas Keniyaa keessa dhaabatonni Demookraatawaan akka jajjabaataniif cicha qabdu rra deebi’ee mirkaneessa.
Kutaa sana keessaa fi addunyaa irratti kanneen gocha kachachalaa rawwatamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf karaa danda’ame maraan ni gargaaramna jechuun gulaalaan har’a yaada isaa xumuree jira.